Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala asandul 'ukulungiswa enegadi ekufutshane nomda - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala asandul 'ukulungiswa enegadi ekufutshane nomda
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBernhard
Ilungele abo banezinto abanokuzenza eBasel ekufutshane okanye bafuna ukonwabela unxantathu omhle!
Ingakumbi le flethi yenza igadi yabucala eneendawo zokuhlala zangaphandle ezigqunyiweyo kunye nezixhobo zale mihla nezintsha. Le ndawo yokusebenzela yangaphambili yalungiswa ngokupheleleyo kunyaka ophelileyo ngentliziyo eninzi kunye nothando ngeenkcukacha kwaye inobuntu bale mihla be-loft kunye neefestile zayo ezinkulu ukuya egadini.
Malunga ne-100 m2 kumagumbi ayi-2 unendawo eyaneleyo yokuziva kamnandi kwaye uphumle.
Kukho igumbi lokuhlala nelokutyela elivulekileyo kunye negumbi lokulala elinegumbi lokugcina izinto elisebenzayo.
Kwigumbi lokulala kukho ibhedi enkulu esentwasahlobo ibe kwigumbi lokuhlala ungatsala isofa enkulu ukuze wenze ibhedi elala abantu ababini.
Kwiflethi okanye indlu ekwicomplex, unegadi yakho kunye neveranda egqunyiweyo. Wamkelekile nokuba nendawo yokoja egadini. Ungangena egadini ngomnyango wetreyini kwigumbi lokulala okanye kumnyango wegadi osecaleni kwendawo yokungena kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex.
Ikhitshi elinento yonke le lelemihla yaye litsha. Ukupheka kwenziwa kwindawo yokuphekela esetyenziswayo, edityaniswe netafile eyakhiwe kuyo. Kukho indawo yabantu abayi-3. Kukho netafile yokutyela enendawo yabantu abayi-4.
Ukuba uhamba, ungayenza loo nto kwidesika enkulu ejongene negadi.
Isilingi yamaplanga enesandi kunye nezinga eliphezulu nayo inceda ngomsebenzi omninzi, ukuze ungazikhathaleli phantse zonke izandi zehlabathi langaphandle.
Kwigumbi lokuhlambela eliqaqambileyo, elikhanyayo emini, ishawari enesibane seshawa egqamileyo yinto ebalaseleyo.
Kwigumbi lokuhlambela uza kufumana umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla.
I-Weil am Rhein yidolophu encinci enento yonke oyifunayo kubomi bemihla ngemihla.
Indawo yethu yokuhlala isembindini kakhulu kodwa ithule kakhulu.
Siyayixabisa iivenkile zokutyela ezikufutshane kunye neehotele kunye nokusondela kwindalo, ngokomzekelo kwimidiliya kunye neRhine.
Ukuba uvakalelwa kukuba unomdla kwisixeko esikhulu, unokuba seBasel kwimizuzu eyi-5!
Ich bin ein gemütlicher Zeitgenosse, der Freude am Reisen hat und deshalb gerne jedem anderen Reisenden die Freude einer gemütlichen Unterkunft zukommen lassen möchte!
Ich freue mich euch bei mir willkommen zu heißen und hoffe ihr habt eine gute Zeit im wunderschönen Dreiländereck :)
Ich bin ein gemütlicher Zeitgenosse, der Freude am Reisen hat und deshalb gerne jedem anderen Reisenden die Freude einer gemütlichen Unterkunft zukommen lassen möc…
Sikulungiselele isitshixo esikhuselekileyo sokubhalisa xa ufika, ukuze ukwazi ukubhalisa xa ufika ngokulula.
Sisoloko sifumaneka ngefowuni. Ukongezelela, sinokukhawuleza sibe khona kwiimeko ezingxamisekileyo, kuba sihlala kumnyango omnye kuphela.
Sisoloko sifumaneka ngefowuni. Ukongezelela, sinokukhawuleza sibe…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Weil am Rhein